Maamulka Sh/Hoose: “Wuu xumaaday xiriirka ka dhaxeeya Ciidanka DF iyo AMISOM | Faafan News
Maamulka Sh/Hoose: “Wuu xumaaday xiriirka ka dhaxeeya Ciidanka DF iyo AMISOM
Masuuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in uu xumaaday xiriirka wada shaqeynta ah ee u dhaxeeya Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM, ee ku sugan gobolkaasi.
Guddoomiye ku xigeenka dhanka amniga gobolka Shabeelaha Hoose Cali Nuur Maxamed oo la hadlay Risaala ayaa sheegay sababta xumaashaha xiriira Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM in ay tahay in AMISOM aanay dhaafin xeryaha Millitari ee ay ka joogaan gobolka.
Waxa uu tilmaamay Cali Nuur AMISOM keliya in ay soo baxaan marka ay doonayaan in ay gaaraan xero kale oo ku taalla gobolka, sidoo kalena aanay jirin dhaq dhaqaaq kale oo gobolka ay ka sameeyaan.
Cali Nuur Maxamed Guddoomiye ku xigeenka dhanka amniga gobolka Shabeelaha Hoose ayaa masuuliyadda arrintaasi waxa uu dusha ka saaray Taliyaha Ciidamada AMISOM ee gobolka Shabeellaha Hoose.
“Waxaa xumaaday xiriirka ka dhaxeeya Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM, in uu xumaado xiriirka labada dhinac waxaa keenay Ciidanka AMISOM oo ka gaabiyay Howlgalka, keliyana ay soo baxaan marka ay doonayaan in ay gaaraan xero kale oo ku taalla gobolka.” Ayuu yiri Guddoomiye Cali Nuur.
Ciidanka AMISOM ayaa saldhigyo Millitari waxa ay ku leeyihiin degaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana hada soo baxaya wararka sheegaya in uu xumaaday xiriirka ka dhaxeeya Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM